एनआरएन अस्ट्रेलियाको नेतृत्वमा डा रेग्मी र गुरूङ मैदानमा :: Setopati
हेमन्त काफ्ले सिड्नी, साउन ९
एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरू क्रमशः डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी रनन्द गुरुङ।
आगामी जुलाई ३१ मा हुने गैरआवासीय नेपाली संघ अस्ट्रेलियाको निर्वाचनका लागि कुल ३ सय भन्दा बढी उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको छ।
सन् २०२१–२३ कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनमा जम्मा १५ हजार २ सय ९८ सदस्यले मतदान गर्न पाउने छन्।
विरोध र समर्थनबीच एनआरएन अस्ट्रेलियामा करिब १६ हजारले सदस्यता लिए पनि गिफ्ट कार्ड र पेपालको लफडाबीच १५ हजार दुई सय ९८ स्वीकृत भएका हुन्। सन् २०१९ को पछिल्लो निर्वाचनमा एनआरएन अस्ट्रेलियामा ११ हजार ६ सय ५७ सदस्यता थिए।
यस पटक एनआरएन अस्ट्रेलियाको अध्यक्ष पदका लागि डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी र नन्द गुरूङ मैदानमा भिड्दैछन्। प्रवक्ता,
महासचिवहुँदै अध्यक्षका उम्मेद्वार बनेका रेग्मी अस्ट्रेलिया सरकारको खानेपानी विभागका वरिष्ठ इन्जिनियरसमेत हुन्। गुरूङले भने यस कार्यकालका प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
‘यस पटक हाम्रो र राम्रो एनआरएन बनाऔ भन्ने साझा नारा बोकेर हामी चुनावी मैदानमा उत्रेका छौ’, अध्यक्षका प्रत्यासी डा ज्ञानेन्द्र रेग्मीले भने।
यस पटक दुबै टोली फरक र अलग टिम बनाएर मैदानमा उत्रिए पनि अध्यक्षका दुबै उमेदवार डेमोक्रयाट हुन्। एक टोलीलाई स्वत्रन्त्र डेमोक्रयाट समूहले अगाडि सारेको छ भने अर्कोलाई आधिकारीक जनसम्पर्क समितिले साथ दिएको छ।
त्यसैगरी महासचिव पदका लागि पूर्व कोषाध्यक्षसमेत रहेका सिड्नीका अच्युत शर्मा थपलिया र क्यानबेराका राजु बाबु अधिकारी, सचिवका लागि तीर्थराज कार्की र सन्ध्या शाहले उम्मेदवारी दिएका छन्।
कोषाध्यक्ष पद भने निर्विरोध भइसकेको छ। युवा प्रतिद्धन्द्धीको काम र सफलताबाट प्रभावित भएर प्रतिद्धन्द्धी बाबुराम गौतमले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि अनिल पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। साथै सह कोषाध्यक्षमा कर्णकुमार यादव र राजकुमार नगरकोटीबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
कार्य समितिको युवा संयोजकमा सिड्नीका युवा अभियन्ता महेश प्रसाई (म्याक्स) र मेलवर्नका बबिन मिश्रले उम्मेदवारी दिएका छन्। सह–युवा संयोजकमा सिड्नीका युवा बद्री बरूवाललाई निर्वाचन समितिले प्रस्तावक समर्थकमा विवाद उत्पन्न हुँदा उमेदवारीवाट बञ्चित गरेपछि क्यानबेराका चन्द्र तिवारी निर्विरोध निर्वाचित भए।
त्यसैगरी आठ जनाको पद रहेको आइसिसी सदस्यमा १६ जना उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन्। उम्मेदवारी दिनेहरूमा बुद्धि डल्लाकोटी, पर्शुराम अधिकारी, मेघराज पौडेल, सरोज पाण्डे, प्रज्वल भट्टराई, राजकुमार अधिकारी, राजेश बुढाथोकी, चीनबहादुर नेपाली, परेशराज घिमिरे, प्रेमप्रसाद कँडेल, सूर्य आचार्य, धर्मराज अधिकारी, नवीन भण्डारी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, अनन्त एलेक्स कार्की, दिक्पालदेव पंगेनी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
यस्तै कार्यकारी समितिको सदस्यमा राजु गिरी, अशोक उप्रेती, रामजी बस्नेत, दामोदर अधिकारी, बिशाल पोखरेल, कृष्ण सुवेदी, कमल भण्डारी, महेश भट्टराई, विवेक क्षेत्री, रमेश अधिकारी, ध्रुब पोखरेल र अनुप थापालगायत छन्।
विभिन्न राज्य संयोजकको निर्वाचनमा भिक्टोरिया राज्यको संयोजकमा हरि खड्का तथा वेष्टर्न अस्ट्रेलियामा दीपक बस्नेत निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। न्यु साउथवेल्सको संयोजकमा वर्तमान उपाध्यक्ष देव गुरूङ र प्रतिज्ञा अधिकारी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। देब गुरूङ हालका न्यूसउथवेल्सका संयोजक समेत हुन् र उनले पछिल्लो कार्यकालमा निकै प्रभावशाली काम गरेर आफूलाई सामाजिक क्षेत्रमा स्थापीत गरिसकेका छन्।
क्यानबेराको संयोजकका लागि अशोक बस्नेत र अभिशेक उप्रेती, क्वीन्सल्याण्ड संयोजकमा आशीष न्यौपाने र विनोदभक्त आचार्य, दक्षिण अस्ट्रेलिया संयोजकमा रेनुका लामा र सन्तोषी गौतम, तास्मेनिया संयोजकमा सन्देश परियार र राकेश शाक्य, नर्दन टेरिटोरी संयोजकमा आशीष भुसाल र विष्णु चापागाई प्रतिस्पर्धीका रुपमा मैदानमा उत्रिएका छन्।
एनआरएएन अस्ट्रेलियाको भगिनी संस्था नारी निकुञ्जको अन्य पदमा निर्विरोध भए पनि एडिलेडकी मञ्जु खड्का र सिडनीकी मोनी लिम्बू नेतृत्वको लागि आमनेसामने भएका छन्।
नारी निकुन्जको सह संयोजकमा समीक्षा अधिकारी पाठक, सचिवमा सर्वदा घिमिरे अधिकारी, कोषाध्यक्षमा जिप्स्योना पौडेल र सदस्यहरूमा प्रजिता गेलाल र पूजा थपलिया निर्विरोध भैसकेका छन्।
यस पटक चुनाबको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको निर्वाचन समितिका आयुक्त तथा एनएसडब्लु राज्य संयोजक डील्ली ढकालले बताए।
पहिलो पटक अनलाईनमार्फत घरबाटै हालिने यस निर्वाचन पहिलेका भन्दा केही फरक र नयाँ भएकोले पनि रोचक हुने आयुक्त ढकालले सुनाए।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ९, २०७८, १२:५६:००